Generator Set,Generator Set Cummins Engine,Set Perkins Generator
Sharaxa Nidaamka Xakamaynta Generator
Habka kantaroolka elektarooniga ah ayaa loo qaabeeyey loona rakibay si loo xakameeyo lana socdoqalabka korontada. Iyada oo ku xiran shuruudaha qalabka korontada,mid ka mid ah dhowr habab oo kala duwan oo lagu xakameyn karo heerarka caadiga ah ayaa lagu rakibi karaa. Nidaamyo kale oo dheeraad ah ayaa lagu rakibi karaa qalab gaar ah taas oo kiiskeedu gaarayo dukumintiyo gaar ah.
Nidaamyada kantaroolka ahi waxay ka kooban yihiin saddex qaybood oo waaweyn oo wada shaqeynaya
Guddiga Xakamaynta - waxay bixisaa hab lagu bilaabo iyo joojinta jeneraytarka, la socoshada hawlgalkeeda iyo wax soo saarka iyo
si toos ah u xiraya koronto-dhaliyaha lagu shubo xaalad khatar ah oo ka timaadda cadaadiska saliida ee hooseeya ama heerkulka sare ee heer-kulka ah si looga hortago waxyeelo gaarsiinta mishiinka / beddelaha.
Module Interface Module (halkii la rakibay) - waxay bixisaa shidaal beddel ah oo loo yaqaan "Starter Motor Solenoid", "Glow Plug" iyo "Solenoid Fuel". Dhammaan wareegyadani waa la ilaaliyaa fiyuusyadaa lagu rakibay moduleka. Hal shakhsi oo iftiimiya ayaa iftiiminaya marka wareeg kasta oo awood loo helo.
Qalabka Xoogsatada Awoodda - wuxuu u adeegaa si uu u ilaaliyo bedelka si toos ah looga jaro gawaarida haddii ay dhacdo in ka badan ama gaaban gaaban. Waxa kale oo ay bixisaa hab lagu beddelo soo saaraha koronto-dhaliyaha.
Akhrinta la xidhiidha:Jenerayaha Dooro Cummins Engine, Perkins Generator Set
Generator Set Jenerayaha Dooro Cummins Engine Perkins Generator Set
Hore : Jeegaga Hore ee Jeneraalka
Xiga : Xakamaynta nidaamka genset